အမေဇုံစားသုံးသူလိမ်လည်မှု - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
Online Shops သုံး၍ ငွေလျှော်ခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 27, 2020 သြဂုတ်လ 27, 2020 GNAF	1 မှတ်ချက်
Taobao နှင့် Tmall ရှိအွန်လိုင်းစျေးဆိုင်များစွာသည်လူအများကိုငှားရမ်းကြသည်။ အထူးသဖြင့်အချိန်နှင့်အမျှငွေအမြောက်အများ ရရှိ၍ အပိုဆုကြေးများလိုချင်သော၊ အမှာစာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်။ အဲဒါကို "လို့ခေါ်တယ်Shuadan"တရုတ်အတွက်။ ဤငှားရမ်းထားသည့်“ ဖောက်သည်များ” သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာမန်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ပြုမူပုံနှင့်တူညီသောပုံစံဖြင့် ၀ ယ ်၍ ၀ ယ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 30, 2020 Madhavi Vudayagiri	1 မှတ်ချက်
ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အသံကျယ်ကျယ်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖတ်ရသည်။ "Trump ကကွန်ဂရက်အရေးယူခြင်းမရှိပါကအမှုဆောင်အမိန့်ဖြင့် Big Tech သို့ 'တရားမျှတမှုကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုပြောကြားသည်" သို့သော်အလုပ်အမှုဆောင်အမိန့်သည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလား။ Amazon ကို Google မှကုန်ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ Facebook၊ Whatsup နှင့် Instagram တို့မှလူများကိုဂူဂဲလ်ကိုလှည့်စားခြင်းမှတားဆီးနိုင်ပါသလား။
သတိ အမေဇုံကတရုတ်မှထုတ်ကုန်များကို FDA စည်းကမ်းများနှင့်မကိုက်ညီသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2019 Christina Kitova	2 မှတ်ချက်
ယနေ့ခေတ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအိမ်ထောင်စုများစွာတွင်ပုံမှန်စျေးဝယ်ခြင်းအလေ့အထ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာအဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူပိုဆိုးအချိန်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်ချွေတာရန်ထင်နေသည်။ Alexa ကဲ့သို့သော virtual လက်ထောက်များပေါ်ထွက်လာလျှင်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ Amazon ၏အဓိကအသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်းသည်အခမဲ့အာမခံထားခြင်းကို ၄၈ နာရီအတွင်းအဆင်ပြေချောမောစေပြီးအချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် ၂၄ နာရီသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးဝယ်နည်းဖြစ်သည်။
Amazon သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူလိမ်လည်မှုကိုလက်ခံထားသလား။ အပိုင်း ၃: တရုတ်နှင့်အာရှအတုကုမ္ပဏီများနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 18, 2019 ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
အမေဇုံလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဖော်ထုတ်တင်ပြမှုအပိုင်း (၁) နှင့် (၂) သည်အမေဇုံပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုစာရင်းပြုစုသောကုမ္ပဏီများအတွက်မည်သို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ကိုပြသည်။ ကြီးမားတဲ့လိမ်လည်မှုပမာဏကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ကျတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ငြင်းခုံခဲ့ကြပါတယ် အမေဇုံသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလိမ်လည်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည် အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်၏ပလက်ဖောင်းတွင်ခန့်မှန်းခြေ ၂၅% ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်အတူ။ Fakespotသုံးသပ်ချက်အတုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကုမ္ပဏီအမေဇုန်အပေါ်သုံးသပ်ချက်အားလုံး၏ 30% ကအတုဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
Amazon သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူလိမ်လည်မှုကိုလက်ခံထားသလား။ အပိုင်း ၂ - ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အတုများစွာသည် Farms မှရွေးချယ်ရန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 6, 2019 ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
ပထမဆောင်းပါးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ် ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ် ဦး ဆောင်သောအမေဇုံသည် Bernie Madoff အားသမိုင်းတွင်ဒေါ်လာအများဆုံးလိမ်လည်မှုတွင်အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုစျေးကွက်အတုသည်အမေဇုံပလက်ဖောင်းရှိကုမ္ပဏီများအတွက်မည်မျှကျိုးနွံကြောင်းကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည် (Ebay နှင့် Walmart တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးပါ) ။ လေး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတု။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူအတုအယောင်များသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ တွစ်တာနှင့်ဗွီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအရှက်ကင်းမဲ့စွာလူသိရှင်ကြားရောင်းချခြင်းသည်သင်အံ့အားသင့်သွားပါက - နောက်လာမည့် 11 ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ခံရမည့်ကုမ္ပဏီများ (စုစုပေါင်း ၁၅ သို့ရောက်ခြင်း) သည်ဤလိမ်လည်မှုသည်မည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုသက်သေပြသင့်သည်။ အမေဇုန်ကိုသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတုတစ်ခုတည်းကိုဖျက်သိမ်းရန်ဝါကြွားခဲ့သည် 2016 သည်ကုန်သည်သုံး ဦး အားပိတ်သိမ်းခဲ့သည်.
Amazon သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူလိမ်လည်မှုကိုလက်ခံထားသလား။ အာမခံချက်နှင့်အတူလာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုကိုသိခဲ့သလား
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 29, 2019 ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
အမေဇုံအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်သူစားသုံးသူလိမ်လည်မှုပမာဏကြီးမားပြီးထိတ်လန့်သည်။ အမှန်မှာ၊ ဤကြီးမားသောလိမ်လည်မှုမှမည်သည့်ကုမ္ပဏီမျှအကျိုးကျေးဇူးမခံစားရပါ Amazon.com။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ကုမ္ပဏီသည်ဈေးနှုန်းများပိုမိုဖန်တီးရန်သူတို့၏လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်စွမ်းကိုရိုးရာနည်းဖြင့်မသုံးပါ။ ၎င်းအစားသူတို့သည်စျေးကွက်အနေအထားကိုတိုးမြှင့်ရန်မသမာသောနည်းလမ်းများကိုပိုမိုသိရှိကြသည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှိအခြားကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းရန်သူတို့၏အရွယ်အစားကို အသုံးပြု၍ အမြဲရောက်ရှိနေသည်။
Ebanel သည် FDA စည်းမျဉ်းများကိုတရားမ ၀ င်ကုန်ပစ္စည်းများစတင်ခြင်းဖြင့်ဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 20, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူ Ebanel နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးထုတ်ကုန်ယုံကြည်ပါတယ် အစွန်းရောက်အစွမ်းထက်လျှော်ထုတ်ယူမှု နှင့် Menthol သည်ဖက်ဒရယ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု၏စည်းမျဉ်းများအရသိက္ခာမဲ့ပြီးတရားမဝင်ဖြစ်သည်။ FDA ကရှိတယ် အတည်မပြုပါ လျှော်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်။
Max Strength Back Pain Relief Cream၊ 2.3oz Purest 750mg Hemp Extract Hemp Cream အဆီမွှေး၊ နာကျင်ခြင်း၊ ပူးတွဲနာကျင်ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံရိုး၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊
FDA ကဒီအသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုမထားပါဘူး ကျောက်ပြားထုတ်ယူမှု မပေးနိုင် မည်သည့် FDA မှတက်ကြွစွာပါဝင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မဆိုပါ ၀ င်ပါက“ နာကျင်မှုသက်သာစေရန်” ကဲ့သို့သော FDA မှအတည်ပြုထားသောအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ ဥပမာ စိတ်ရောဂါ နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးများအတွက် FDA ကိုတက်ကြွပါဝင်စဉ်းစားသည်။ Menthol နှင့်အတူနာကျင်မှုသက်သာစေရန်ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် FDA ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်အလုပ်လုပ်ရမည်။
အမေဇုံကသူတို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ၊ ၁၀၀% ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အတုများနှင့်အတူနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ Fern & Willow
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 13, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	1 မှတ်ချက်
အမေဇုံကပြသသောဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည် အမေဇုံပူအသစ်ဖြန့်ချိ ဒါပေမယ့် Amazon ကသူတို့ site အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုသူတို့အဘို့မှတ်တမ်းတင်ရှိခြင်းပြီးနောက်ပင်, ကြီးမားတဲ့ပမာဏပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ဘာမျှမလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတုနှင့်ကုမ္ပဏီအတုများသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များစတင်သောအခါအမေဇုန်ထံမှကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းပါးများစွာတွင်ပြသခဲ့သည်။ Amazon ကနောက်ထပ်တစ်ခုပေးနေတယ် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ချက် cheaters မှအချိုးမညီအားသာချက် ထုတ်ကုန်အသစ်တွေလည်းထွက်လာပြီး Hot New Releases အဖြစ်စာရင်းဝင်တယ်။
Ebanel သည် Amazon မူဝါဒများ၏မျက်နှာကိုဗြောင်ကျကျတံတွေးထွေးခြင်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 3, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
Ebanel သည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတုများကိုနှစ်ဆကျော်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာသားတစ်ည ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါ ဦး။ ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းတွင်သူတို့၏ရေမှုန်ရေမွှားထုတ်ကုန်များသည်ရုတ်တရက်နစ်မြုပ်နေသောရမှတ်များဖြင့်ရုန်းကန်နေရသည် (အပြုသဘောဆောင်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအတုအယောင်များရှိနေသော်လည်း) ။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့၏ရေမှုန်ရေမွှားသည်၎င်းတို့၏မုန့်ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိကြောင်းပြောကြားခြင်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတုအတုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမေဇုံသည်ထိုထုတ်ကုန်နှစ်ခုအားအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခံရသည်ဟုတိုင်ကြားပြီးနောက်ပိုင်းခွဲထုတ်လိုက်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Ebanel ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတုများသည်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ပြီးရေမှုန်ရေမွှားထုတ်ကုန်တွင်သူတို့၏ရမှတ်များကျဆင်းခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် Ebanel ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ရေမှုန်ရေမွှားထဲသို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွင်းအပြင်, သူတို့သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်သွား။ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်!
Ebanel မှတုန့်ပြန်ချက်အတုများကို Amazon မှဆက်လက်ဆုချသည် - Blakeview မှစားသုံးသူလိမ်လည်မှုများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 2, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုတရားရေးဌာနကိုပို့ပြီးတဲ့အခါသူတို့တုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အနာဂတ်ဆောင်းပါးတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Amazon သည်အမေရိကန်နှင့်ရိုးသားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟုဆိုခဲ့သည်; Amazon သည်အချိုးအစားမညီမျှမှုနှင့်မျှတမှုမရှိသောအားသာချက်တစ်ခုအားလူသိများပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်လိမ်လည်လှည့်စားသူများနှင့် / သို့မဟုတ်နေ့တစ်နေ့မှအကြီးစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 26, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	2 မှတ်ချက်
Amazon အကြောင်းသတင်းဆောင်းပါးတွေရေးထားတယ်။ ပေးဆောင်ရသည့်ပေးဆပ်မှုသည်မည်မျှပင်ဆိုးဝါးနေပါစေပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုအတုများသည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြစ်လာသည်မှာအမေဇုံကကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးပို့ခြင်း၊
ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြိုးကိုင်ရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို Amazon တွင်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတုများကိုစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအမေဇုန်ရှိ Jeff Bezos သို့တိုက်ရိုက်အကြိမ်ကြိမ်တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊
Amazon - Travelambo ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီအတုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ၁၀၀% ကိုပြသသည်။ Alibaba & Ebanel ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလိမ်လည်မှု Update မှပိုင်ဆိုင်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 19, 2019 ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့ဒီရက်သတ္တပတ် Travelamo ပြန်လည်သုံးသပ်။ ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုတင်နေစဉ်အတွင်းကုမ္ပဏီများသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုအများဆုံးခွဲဝေသုံးစွဲသူများဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏတွေ့ရှိရသည်။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ် Travelambo သားရေအ ၀ တ်အထည်များအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နံပါတ်ကဒ်ပြားအဖုံးကိုင်ထားသည့်အမေဇုံရှိ Magnetic Shut (Napa Red Wine).
Wewgo Ball Bearings 608-2RS - Amazon ကုမ္ပဏီ၏သုံးသပ်ချက် ၇၀% ကျော် - ကုမ္ပဏီအတုမှပြုလုပ်သည်
ဇူလိုင်လ 13, 2019 သြဂုတ်လ 11, 2019 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
Wewgo Ball Bearing 608-2RS ၏သုံးသပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသူတို့အနေဖြင့် Amazon မှ 4.4 ကြယ်များကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒီမြင့်မားတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်သူတို့ဟာ Amazon Choice Badge ကိုရရှိခဲ့တယ်။
၄.၄ ကြယ်များရှိခြင်းကြောင့်ဤကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စေသည်၊ သို့သော်အဓိကပြoneနာတစ်ခုမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Wewgo Ball Bearing 4.4-70RS အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ၏ ၇၀% ကျော်သည်အတုများဖြစ်သည်။ Wewgo နောက်ထပ် cheat ပါ! Wewgo နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုတစ်ရက်မှစပြီးစားသုံးသူလိမ်လည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Wewgo သည် Amazon Choice Badge ကိုဘယ်တော့မှမခံထိုက်ပါ။ ကြော်ငြာများကို / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကို၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းမှဖယ်ရှားရန် Amazon ကိုလူသိရှင်ကြားတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တိုင်ကြားချက်များစွာအပြီးတွင် Ebanel (ယခုအချိန်အထိစားသုံးသူလိမ်လည်မှုကိုအမှတ်တမဲ့ကျူးလွန်သူဖြစ်ခြင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံး) သူတို့သည်အမေဇုံမှန်ကန်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတု (သို့) Amazon's Choice Badge ကိုမဖယ်ရှားသေးပါ။
Ebanel ဓာတ်ခွဲခန်းများအမေဇုံအပေါ်လိမ်လည်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနိမ့်သစ်ကိုအပိုင်း ၂ သို့
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 10, 2019 ဇူလိုင်လ 13, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
အမေဇုံစျေးကွက်အပေါ် Ebanel Laboratories လိမ်လည်သုံးသပ်ချက်များအပေါ်တစ် ဦး ကဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေး။
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အမေဇုံ Marketplace ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊ ပိုမိုကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုးပွားစေသည်။ အထူးသဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ အလွန်စျေးကြီးသောပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ယှဉ်လျှင်ကုမ္ပဏီသစ်သည်မည်သို့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ Ebanel ဓာတ်ခွဲခန်းမှာငါတို့၏မိတ်ဆွေများကသေချာတွက်ဆရှိသည်!
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတုများ Amazon သည် Rewards - The Ebanel Case
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 2, 2019 သြဂုတ်လ 11, 2019 ဂျေးက Black	2 မှတ်ချက်
အမေဇုံမှ Numbing အမျိုးအစားသည်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြင့်ပျံ့နှံ့နေသည်။ Ebanel ဓါတ်ခွဲခန်းထက်ပိုဆိုးတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလားအလာရှိသောမှားယွင်းသောသုံးသပ်ချက်များ၊ သူတို့၏ထုတ်ကုန်အပေါ်အပြုသဘော၊ ပြိုင်ဘက်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် Amazon သို့တိုင်ကြားချက်တင်ခဲ့သည်။ Ebanel အကြောင်းဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သို့တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ရေးသားခဲ့သည်.
အမေဇုံကကျွန်တော်တို့ကိုမတ်လ 26th 2019 ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်။